Indlela hlola ekhokhwa ngaphambi phesheya futhi ungahlali ekhaya
Daily phesheya eshiya lenqwaba zabantu baseRussia. Tinjongo ezahlukene: izinkambo waqondisa, uhambo, ukuvakashela izihlobo. Ngaphansi kwesimo some muva ukuqoqa izikweletu bailiffs eziningi kokushiya unendaba umbuzo kanjani ukuqinisekisa izikweletu ngaphambi phesheya.
Izizathu ngokuba Imikhawulo Ukuhamba
Kukhona impela izizathu ezimbalwa ayikwazi bavunyelwe ukuba baye phesheya. Hlola ukuthi lokhu kwenziwe ngqo ehhovisi namasiko database sangaphakathi.
Avinjwe eziya kwamanye amazwe ukuze kule mikhakha elandelayo:
Abantu abangewona esemsebenzini ukufinyelela izimfihlo isimo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi umsebenzi uvinjelwe travel ihlala iminyaka eminingi ngemuva kokuthatha umhlalaphansi. Yonke imigomo nemibandela ebekiwe inkontileka umsebenzi.
Abantu abangofakazi amasosha noma eminye imisebenzi yokusiza umphakathi.
Abasolwa futhi abamangalelwa eenkambisweni zobulelesi okulindile sinqumo senkantolo.
Lowo owatholakala enecala ngaphambi kokuphela isikhathi a okunemibandela umusho noma ukukhulula.
Abantu abanjalo kancane, bavamise kukhuluma nabo bayazi ukuthi phesheya akuvunyelwe. Okuningi yalabo abanhliziyo ukuhamba kukhawulwe ngenxa yokubakhona nezibopho zabo ezivelele zezimali. Kubalulekile ukuba bazi ukuthi ukuhlola ekhokhwa ngaphambi phesheya.
Phuma indlela izingqinamba
Kwakucatshangwa ukuthi zonke okweletayo ngaphandle amasheke uyazi ukuvinjelwa travel phesheya. nokukhawulela indlela sichaziwe ngezansi.
Okokuqala, igceke lafeza icala ukuze alulame izikweletu. Ngemva komhlangano wakhe wakhipha imiBhalo ngokubulawa, ngesisekelo lapho bailiffs ukubeka okweletayo sokukhokhwa kwesikweletu. Nokho, awusebenzi ngaso sonke isikhathi sifike lapho siya khona, ngoba kwakungenzeka ukuba okweletayo zingashintsha izindawo zokuhlala.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi travel phesheya kungase kungagcini izinkokhelo lezi zinhlobo ezilandelayo izinkokhelo:
izinhlawulo, kuhlanganise amaphoyisa omgwaqo;
ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso,
Lapho uhlela uhambo, ungakwazi ungakhathazeki kuphela labo abangamakhosi nhlobo lezi zibopho. Abanye bangase bamane nje singaqapheli ukutholakala izikweletu.
Nokho, noma kunjalo, yinhlangano engenzi-ukufika izimali kukhokhelwa izikweletu bailiffs uhlolwa ulwazi inkonzo ukufuduka ukutholakala passport ka okweletayo obakhathalelayo. Ngemva kwalokho, yokungakhokhi kolwazi izikweletu idluliselwa ku ekulawulweni kweminyele ukuphathwa. Okweletayo uyaziswa ukuthi travel yakhe phesheya lilinganiselwe. Ngisho noma ikheli isakhamuzi ulwazi olunjalo itholiwe, ukuze singathwesi ususenkingeni, kubalulekile ukuhlola ukuba igama lakhe ohlwini abakweletayo.
Labo ucabange indlela ukuqinisekisa izikweletu ngaphambi kokuba athathe uhambo oluya ezweni elikude, kungase kube ukuhlakanipha ukwenza inthanethi ukuze ngaleso website esemthethweni Onogada Izikhungo ulwazi sigaba ukutholakala izikweletu. Nokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ulwazi kusayithi kungenziwa olusha nge ukubambezeleka. Okuningi ulwazi oluningiliziwe angacelwa mathupha endaweni bailiffs emzini wakhe.
Uma kokuya isikweletu efakwe, kufanele akhokhe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Emngceleni irisidi kungasizi - kuyodingeka ulinde baxoshwe uhlu abakweletayo. Ngokuvamile lokhu kwenzeka cishe amasonto amathathu. Ngakho-ke, uma uhlela travel phesheya, kumele bakhokhe izikweletu kusengaphambili.
Abantu abaningi ufuna ukwaziswa kanjani ukuqinisekisa izikweletu ngaphambi kokuba athathe uhambo oluya ezweni elikude, azi ukuthi imingcele kungenziwa circumvented. Nokho kungcono ukukhokha zonke izikweleti ngesikhathi.
Izinto udinga ukuthenga, uma ube isicebi
Kanjani ukuphila ruble 3,000 ngenyanga, futhi akusho ukuthi kuphula ngokwabo e zokudla nezezimpahla zokugqoka
Indlela ukudlulisa imali ekhadini MTS Sberbank nezinye amabhange?
Wake wacabanga ukuthi lezi izinkanyezi wenze umcebo nohlobo eyinhloko yomsebenzi? Kwadlula amaqiniso amasha
Kuyini eqashisa ngamafulethi?
Big Qamar, ungubani - indalo engeyona ingozi noma isilo?
Uthi Asikholelwa "Emoyeni ku Shell": indlela ukubuka anime namafilimu
Starter Vaz-2101: Izinkinga kanye Isixazululo. Okuhle "penny" ubudala
Zonke imisebenzi Dostoevsky uhlu. LweziNcwadi Fodora Mihaylovicha Dostoevskogo
Amanzi negesi heater Electrolux: incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa